Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings'
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan magaca ugu wanaagsan "Qalalaase". Sheekadeena Caruurnimada ee Tyrone Mings Story Plus Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Kordhinta Tyrone Mings. Astaanta Sawirka: DailyMail, iTV, Kubbadda cagta iyo eadt
Haa, taageerayaasha badankood waa ay yaqaanaan isaga markii ugu horeysay ee England, ciyaar hore oo la sheegay in lagu aflagaadeeyay hadalada cunsuriyada ah ee taageerayaasha Bulgaria. Si kastaba ha noqotee, kaliya dad yar ayaa tixgeliya taariikh nololeedka Tyrone Mings kaas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Hore iyo Taariikhda Qoyska
Tyrone Deon Mings wuxuu ku dhashay maalinta 13th ee Maarso 1993 hooyadiis, Dawn Johnson iyo aabihiis, Adrian yaqaan Adie Mings oo ku taal magaalada Bath, United Kingdom. Wuxuu ku dhashay inuu yahay wiilka kaliya ee sedex gabdhood u dhashay waalidkiis oo jecel oo asal ahaan dhaqamo kala duwan leh.
La kulan waalidiinta Waamo Tyrone Mings - Dawn Johnson iyo Adie Mings. Astaanta Sawirka: Twitter
Tyrone Mings wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa reer Barbados ilaa iyo aabihiis. Sida hoos ku xusan, kani waa jasiirad ku taal gobolka Kariibiyaanka Waqooyiga Ameerika. Ma ogeyd?… Waa meesha ay ku dhalatay heesta caanka ah Rihanna. Sidii gumeysi gumeysi oo hodan ah, waddanku wuxuu noqday xarun Ingriis ah oo ku taal ganacsiga addoonsiga Afrika ee ku xeeran 1807. Tani waxay muujineysaa in ku dhowaad dhammaan dadka madow ee deggen Barbados ay ka mid yihiin ayeeyooyinka Tyrone Mings ay leeyihiin xididdo Afrikaan ah.
Tyrone Mings Qoyska asalka ayaa sharxay. Astaanta Muuqaalka: WorldAtlas
Tyron Mings wuxuu ku noolaa noloshii hore ee adag markii uu ku soo koray hooyadiis iyo seddexdiisa gabdhood. Markii uu yaraa, wuxuu arkay xiriirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya hooyadiis iyo aabihiis markay kala tageen, ka dib hooyadiis ayaa kaxaysay isaga iyo walaalihiis. Markii hore, waxay sii wadayeen inay la noolaadaan saaxiib dhow oo hooyadiis ah oo ku yaal Chippenham (Magaalo ku taal Ingriiska) maaddaama aysan jirin meel kale oo lagu beddelan karo. Maalin maalmaha ka mid ah, labadaba Mings, hooyadiis iyo walaalihiis dhibaatooyin la xiriira awgeed, waxay go’aansadeen inay ka baxaan meesha, iyagoo aan haysan meel kale oo ay aadaan iyo lacag aan lacag lagu siin karin si ay guri kale ku helaan.
Intii uu sharaxayay asalkiisii ​​qoysnimo ee saboolka ahaa iyo barbaarintiisii Telegraph, wuxuu yiri nolosha waa loo rogay markii ay sii wajaheen fursado kale oo aan ahayn inay ku noolaadaan hoyga hoylaawe ah. Intii uu ku sugnaa hoyga, Mings, hooyadiis Dawn iyo seddex gabdhood oo walaasheed ah dhammaantood waxay wadaagaan labo sariirood.
Intii lagu jiray caruurnimadiisii ​​hore, Tyrone Mings, hooyadiis & walaalihiis dhammaantood waxay ku noolaayeen hoy hoy la'aan ah. Dhibcaha: VoiceofOC & Daily Mail
Qof kasta oo hoyga badbaadada ku fiicnayn uma fiicnayn iyaga. Hooyo, wiil iyo gabdhaba labaduba waxay ku noolaayeen nolol naxdin leh iyadoo ku dhawaad ​​waxkasta shacabka lala wadaago magacaa…; Goobta dharka lagu dhaqdo, musqulaha, biyo-dhaqashada, iwm.
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Intii ay ku noolaayeen hoyga hoylaawe ah, Mings waxay dareentay baahida loo qabo in la aado dugsiga si wax looga qabto noloshiisa. Ka fog iskuulka, kubada cagta waxay noqotay badbaadadiisa waana isha kaliya ee murugada leh ee ka fog xaqiiqada dhibaataysan.
Tyrone Mings Education waxaa lagu daray kubada cagta. Amaah HPR iyo DailyMail.
Isagoo ka wanaagsan caruurta kale ee ciyaarta, Tyrone Mings wuxuu ogaa inuu leeyahay kartida oo uu wax uun ka qaban karo noloshiisa kubada cagta. Markuu tixgaliyay dhibaatadii uu kala kulmay wakhtigaas, waxa kaliya ee uu doonayay ayaa ah inuu isticmaalo kubada cagta si uu ugu noolaado nolol qoyskiisa saboolka ah.
Si uu u helo xirfad wanaagsan, waxa uu bilaabay in uu badiyaa naftiisa galo garoomada kubbadda cagta ee maxalliga ah, isaga oo bartay ganacsigiisa kubbadda cagta oo ah difaac adag. Xilligaas markii uu ciyaarayay kubbadda cagta, daawadayaasha yaqaana sheekada qoyska Tyrone Mings ee hoyga hoylaawayaasha waxay u muujiyeen xoogaa ixtiraam + dhiirigelin maadaama aysan waligood shaki ka qabin inuu ku socdo jihada saxda ah.
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Nolosha Mudnaanta Hore
Ku faanida hooyadiis iyo walaasheed waxba kama oga goorta nasiib wanaag Mings iyada oo loo marayo shaqo adag iyo dilitaan ayaa loogu yeeray inuu ka qeyb galo tijaabooyinka kubada cagta akadeemiga Southampton. Markay siddeed jir ahayd (sanadka 2001), Mings waxaa lagu qoray dugsiga akadeemiyada kadib markii uu ku gudbay tijaabooyin midabyo duulaya.
Tyrone Mings Nolosha Hore ee Kubadda Cagta- Maalmihiisii ​​uu ku jiray Akademiga Southampton. Astaanta Sawirka: DailyMail
Markay ku soo biirtay, waxay xiiso u lahayd daafaca da'da yar. Laakiin da 'yarta Tyrone Mings waxay ahayd inay sameyso allaabooyin badan si ay uga koraan darajooyinka akadeemiyada. Ahaanshaha mid ka mid ah akadeemiyadihii ugu fiicnaa England, oo soo saaray hibooyin heer caalami ah - sida Alan Shearer, Gareth Bale iwm, runti waxaa jiray tartan aad u weyn oo boosaska ah iyo hanjabaadyo la xariira ciqaab.
Sannadka 2009 runtii wuxuu ahaa sanadka ugu xun ee qoyska Tyrone Mings. Difaaca ballan-qaadka waxaa sii daayay Saints-ka 2009 (da 'da' 15) markii akadeemiyadu sheegtay inay ahayd natiijada ka dhalatay miisaaniyaddii dhallinyaradeed ee laga saaray.
Tyrone Mings dhibbane uma ahan oo keliya waxa loogu yeero 'miisaaniyad goynlaakiin sidoo kale kooxdu waxay ku eedeeysay inuu yahay mid aad u maqaar yar ama fudud. Wax yar ma oga inay sameynayaan khalad aad u weyn sii daayo mustaqbal 6 cagaha 5 inji (Dhererka Tyrone Mings) Qaabka xiriirka iyo sidoo kale mustaqbalka xulka England.
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Waddada Weyn
Ciyaartoy kasta oo ka soo koray asal qoys sabool ah oo ku noolaa iyada oo lagu diidayo akadeemiyada kubbadda cagta ayaa si fiican u ogaan doonta xanuunka qotada dheer ee dareenka leh iyo cawaaqib xumada maskaxeed ee ay yeelan karto Iyada oo yar ama aan aamini jirin ciyaarta, Tyrone Mills saboolka ah ayaa go'aansaday inuu ka tago kubada cagta markii uu ahaa 15. Aad u murugo badan !!
Tyrone Mings waxay sii wadday inay shaqo ka raadsato Chippenham, oo ah suuq suuq weyn oo taariikhi ah ku leh waqooyi-galbeed Wiltshire, England. Shaqadiisii ​​ugu horreysay waxay ahayd goob maqaayad ah (goob lagu kulmo oo dadweynaha ah) halkaas oo uu ku jiiday dhibco (khamri la adeegsaday) oo loogu talagalay £ 45-usbuucii. Si loogu kabo daqliga soo gala si uu u bixiyo biilasha, Tyrone wuxuu go aansaday inuu shaqo kale raadsado.
Fagaaraha White Hart ee Chippenham halkaas oo Mings jiiday dhibco. Astaanta Sawirka: EuroSports iyo TheSun
Ugu dambeynti Mings wuxuu helay shaqo guri talo bixin ah (lataliye amaahda guryaha), waana shaqo kufilan oo bixin kara biilashooda. Intii uu shaqeynayay, wuxuu dhiganayay Dugsiga Millfield ee Somerset labo sano. Iskuulka kadib markii uu maqlay sheekadiisa diidmada ee qalbigiisu wuxuu ahaa mid kufiican in loosoo bandhigo deeq waxbarasho oo kubada cagta ah, taas oo ka dhigtay Mings maskaxdiisa iyo dib ugu laabashada kubada cagta.
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Ubaxnimada
Kadib markii uu ka baxay dugsiga, deeq-waxbarasho (Mings) wuxuu u horseeday koox aan horyaalka ka aheyn Yate Town oo ku taal Gloucestershire. Halkaa, wiilka liita ayaa bilaabay inuu la dagaallamo jidkiisa. Xilligii xagaaga ee 2012, si fiican ayuu u kacsanaa sida uu aqbalay kooxdiisii ​​guriga ee Chippenham Town. Naadiga ayaa isaga siisay fursad uu kaga qeyb galo tijaabooyin kala duwan meelkasta oo uu ka soo baxay kooxda isaga oo uga mahadcelinaya tayadiisa.
Tyrone Mings waxaa la siiyay deeq waxbarasho oo kubada cagta ah taasoo ka caawisay inuu ku soo laabto kubada cagta. Astaanta Sawirka: TheSun
Ka dib tijaabooyin fashilmay oo ka dhacay Cardiff City, Swindon Town, Portsmouth iyo Bristol Rovers, Mings oo leh ruux aan waligii dhicin ayaa soo jiidatay daafaca hore ee Ipswich Russell Osman kaasoo go'aansaday inuu caawiyo. Nasiib wanaagse nasiib ayuu u yeeshay, Cusmaan Mings wuxuu kula taliyay macalinka Ipswich Town Mick McCarthy oo isagu ku casuumay maxkamad.
Halkii uu ka burburin lahaa magaalada Ipswich, daafaca soo noqnoqonaya wuxuu ka soo koray xooggoodii una sii xoogaysiiyay, isaga oo ka soo dhaqaaqay eber-ka una gudubtay geesi aan shaki lahayn isla markaana dib uugu celin doona madaxiisa (kaaliyaha aayaha) muuqaalkiisa cajiibka ah.
Tyrone Mings wuxuu ka koray xoog ilaa tabar xoog leh oo soo jiidatay madaxiisa. Astaanta Sawirka: TheSun
Bilowgii bilowgiisii ​​wuxuu yimid markii uu qaatay abaalmarinta Xiddiga Sannadka Horyaalka ee XilliX / 2014. Arintaan ayaa soo jiidatay kooxaha Premier League kuwaasoo jilbaha ka baryey saxiixiisa.
26 Juun 2015, Mings wuxuu u saxeexay AFC Bournemouth. Si looga fogaado u tartamida boosaska, wuxuu aqbalay inuu amaah ugu biiro Aston Villa. Go'aankani wuxuu isbeddel weyn ku yeeshay mustaqbalkiisa. Villa, daafaca weyn ee 6-cagta-5 daafaca ayaa adkaystay meteoric kor u kaca caan. Wuxuu ka mid noqday ragga xiddigta leh waxay ka caawisay Villa inuu ku guuleysto kulamada play-off-ka 2019 EFL.
Tyrone Mings wuxuu noqday taageere jecel sida uu Villa uga caawiyay inay sugto finalka koobka EFL Championship-ka 2019. Sawirka Sawirka: Twitter
Ka dib markii ay ka caawisay Aston Villa hormarinta, Mings waxay noqotay taageere adag. Waqti aan jirin, wuxuu noqday mid ka mid ah guryaha difaaca ee ugu wanaagsan England. Kordhinta noocan oo kale ah ayaa ka dhigtay inuu boos ka helo xulka qaranka England. Waxa kale oo ay ku muteysatay inuu ciyaaro kulankiisii ​​ugu horreeyay ee xulka Ingiriiska oo ay ka buuxaan aflagaado cunsurinimo ah oo ka imanaya taageerayaasha Bulgaria.
Bal eeg, wiilka yar oo mar ku noolaa hoy hoy la'aan ah, ayaa hadda ifka ubaxinaya indhaha taageerayaasha kubada cagta. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Nolosha Xiriirka
Kordhintiisa caannimada iyo u saftay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee England, waxaa hubaal ah in inta badan taageerayaasha kubada cagta ay tahay inay weydiiyaan cidda gabadha Tyrone Mings noqon laheyd. Ma jiro wax diidi kara xaqiiqda ah in caannimadiisa, muuqaalkeeda qurxoon ay la mid tahay dhererka 6 ft 5 ma u yeeli doono isaga in loo diido marwada.
Waa kuma gabadha Tyrone Mings Gabar
Si kastaba ha noqotee, gadaasheeda kubbadda cagta guuleysta, waxaa jira gabar saaxiibtinimo oo qurux badan oo aan aad looga aqoon. Runtu waxay tahay- Waqtiga qoraalka, suuragalnimada qarsoon ee suuragalka ah ee Tyrone Mings ayaa ah mid ka baxsata baarista indhaha dadweynaha si fudud maxaa yeelay jaceylka noloshiisu waa mid sir ah oo laga yaabo inuu riwaayad ka madax banaanayn.
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Naftaada Shaqsiga
Inaad barato Tyrone Mings Nolosha shaqsiyeed ee ka fog nashaadaadkeeda waxay kaa caawinaysaa inaad sawir wanaagsan ka hesho shakhsiyaddiisa.
Bilaabidda, Mings waa qof adag oo caqli badan isla markaana inta badan ku riyooda rabitaankiisa weynaan. Markii uu ka maqnaa kubada cagta, wuxuu inta badan ku lumiyaa waqti badan qolka jimicsiga si uu u dhiso muruqyadiisa iyo jismihiisa adag. Kubadda cagta dibadiisa, Mings wuxuu isu arkaa inuu yahay ganacsade. Ma ogeyd?… Wuxuu ku leeyahay shirkad naqshadeeye gudaha ah oo ku taal Bournemouth.
Fahmitaanka shaqsiyada Tyrone Mings banaanka garoonka. Amaahda IG
Sidoo kale on Tyron Mings Life Life, waa shaqsi aan naftiisa jeclayn oo jecel inuu caawiyo dadka kale isagoon rajeyneynin inuu wax uun ku soo laabto. In kasta oo dadka badani ku raaxaystaan ​​maalinta ciida Kirismaskooda. Tyrone Mings iyo saaxiibtiis ayaa waqtigooda siiya dadka nasiibka daran ee hoyga hoylaawayaasha, iyagoo quusinaysa cuntada iyo waxyaabaha qaaliga ah.
Tyrone Mings waxay soo noqotaa raallinimo iyadoo booqaneysa oo caawineysa dadka ku nool hoyga hoylaaweyaasha. Dhibcaha: Xiddiga Ipswich
Shaki la'aan, Tyrone Mings Nolosha shakhsiga ah waxaa lagu gartaa naxariis iyo karti shucuur.
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Nolosha Qoyska
Qisada qoyska Tyrone Mings ayaa baray dad badan oo la halgamaya, laakiin ku hamiyaya inay gaaraan weynaan taas 'Sida ugu wanaagsan ee aan dareemaynin rajo la'aan waa in la kaco oo wax la qabto'. Sida wakhtigii qorista, Tyron Mings wuxuu qasaaro ku sameeyay qoyskiisa kaligood noloshiisa madaxbanaanida dhaqaalaha, dhamaanteed mahadsanidiin kubada cagta. Haddaba, aan ku siino faham dheeraad ah xubnaha qoyskiisa.
Ogaanshaha waxyaabo dheeri ah oo ku saabsan Tyrone Mings Aab: Kubada cagta ee qoyska waligeed kuma bilaaban Tyrone. Ma ogeyd?… Aabihiis Adie Mings wuxuu ahaa weeraryahan hore oo aan horyaal ka aheyn kooxda Batroolka iyo kooxda Gloucester City. Wadnaha la cafiyey ee Tyron Mings wuxuu ka caawiyay dib-u-midaynta aabbaha iyo wiilka labadaba. Ma ogeyd?… Labada aabbe iyo wiilkooduba weli waxay ku shaqeeyaan isku xir ganacsi oo isku mid ah. Adie Mings sida wakhtiga qoristu wuxuu u shaqeeyaa sidii koox indha indheeye u ah naadiga Kubadda Cagta ee Chelsea.
Tyrone Mings ayaa leh aabihiis- Adie Mings. Astaanta Muuqaalka: Instagram
Si aad wax uga ogaato arrimaha ku saabsan Tyron Mings Hooyo: Dawn Johnson ayaa bagan u yeeleysa magaca aabbeheeda kadib markii ay ka tagtay ninkeeda dhowr sano kadib markii ay la kulmeen. Daarood, hooyo xoog leh uma sheegto Wiilkeeda, in ay daciif noqoto si yeeyda darfaantu u hesho isaga. Iyadu beddelkeed, ayaa isaga ku dhiirrigelisay oo ku taageertay intii uu jiray weynaantiisa. Dawn quruxda badan iyo wiilkeeda waqtiga qorista, hadda waxay ku raaxeystaan ​​nolosha ugufiican.
Tyrone Mings ayaa lala xiriirinayaa hooyadiis- Dawn Johnson
Ogaanshaha inbadan oo ku saabsan Tyrone Mings Siblings: Gabdhaha walaalaha ah waa Cherrelle Mings, Iesha Mings iyo mid kale oo yar oo aan wax badan laga aqoon. Iyada oo loo mahadcelinayo walaalihiis, sida ay isaga ag taagnaayeen xilliyadihiisa oo dhan, Mings mar ayuu ku yiri ereyadiisa Runtii waligeey uma baahneyn asxaab in aan ku weynaado dhamaan maxaa yeelay waxaan lahaa walaashay". Sida wakhtigii qorista, mid ka mid ah walaalihiis oo lagu magacaabi jiray Cherrelle Mings oo hadda leh magaca (Cherrelle Baram) ayaa la qabaa.
Tyrone Mings waxay leedahay walaalihiis oo jecel - Cherrelle (bidix) iyo Lesha (midig) oo qaatay muuqaalka hooyadood .. Amaah: IG
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' nololeedka
Barashada qaab nololeedka Tyrone Mings waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo heerkiisa nololeed ah. Bilaabidda, xitaa inaad lacag badan sameyso waa shardi lagama maarmaan ah, Tyrone Mings ma u aragto inuu isagu ku nool yahay qaab nololeed qalaad oo si fudud looga dareemi karo baabuurta hodanka ah iyo guryaha waaweyn. Waxa uu kaxeynayaa celceliska baabuurka kubada cagta, calaamad muujineysa qaab nololeed hooseeya.
Tyrone Mings waxay wadataa celcelis ahaan ciyaartoyga Gawaarida Gawaarida. Sawirka Sawirka: IG
Tyrone Mings wuxuu sameeyaa lacago ku filan oo uu ku maalgeliyo ganacsigiisa, wuxuu ku bixiyaa sadaqooyin iyo tan ugu muhiimsan, midda uu u adeegsado inuu ku noolaado nolol raaxo leh xeebaha caanka ah kuwaas oo ah halka uu ugu jecel yahay fasaxyada. Hoos waxaa ku yaal sawir Mings haysata intuu ku raaxeysanayo doonyadiisa.
Nolosha noloshiisa ee Tyrone Mings- Wuxuu jecel yahay inuu lacagtiisa ku bixiyo badda dhexdeeda si uu ugu raaxeysto doonnida doonta. Sawirka Sawirka: IG
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Wuxuu mar magdhabay taageerayaasha iibsaday maaliyaddiisii ​​hore: Hal mar waqti ka mid ah 2014, Tyrone Mings wuxuu bedelay lambarkiisa maaliyaddiisa No15 illaa No3 ka dib markii Aaron Cresswell loo wareejiyay West Ham United. Ficilkan ayaa yimi waxyar ka dib markii maaliyaddiisa No15 uu mar hore soo iibsaday qaar ka mid ah taageerayaashiisa Ma ogeyd?… Mings wuxuu ahaa nin deeqsi ah oo bixiyay inuu iibsado maaliyado cusub oo loogu talagalay taageerayaasha iibsaday maaliyado uu lambarkiisii ​​hore ee 15 ku daabacay dhabarka.
Tyrone Mings- waxaa lagu amaaney ficil weyn ka dib markii ay ballanqaaday inay iibsato maaliyado cusub taageerayaasha leh lambarkiisii ​​hore ee kooxda. Sawir-amaahda BBC iyada oo loo maro GLENN PARKER / TOM PULLEN.
Wuxuu mar ku dhex istaagay Zlatan Ibrahimovic Madaxa: Tyrone Mings wuxuu sameeyay mar aan loo maleynaynin- taas oo la sheegay inuu madaxa kaga dhuftay madaxa Zlatan Ibrahimovic, taasoo ah ficil lagu sameeyay inuu ganaax ku maqnaa shan kulan. Sababta oo ah wuxuu ahaaZlatan“, Zlatan ma dareemin wax xanuun ah oo ciyaarta ciyaarta waxay ku sii waday aargudasho maskaxeed.
Tyrone Mings ayaa mar keliya madaxa kaga dhuftay madaxa Zlatan Ibrahimovics. Dhibcaha: TheSun
Daqiiqado yar ka dib ciyaarta, Zlatan Ibrahimovic wuxuu fursad u helay inuu ka aarsado Mings. Waqtigaan, midigta reer Sweden ayaa xusul ka gilgishay inta lagu gudajiray koornada geeska taasoo uu ku andacooday inay aheyd Mings oo nasiibdarro ku dhacday xusulka.
Tyrone Mings iyo Zlatan Ibrahimovic Feud. Astaanta Sawirka: TheGuardian
In kasta oo xusulku jiro, waxay ahayd Tyrone Mings oo helay ganaax dheer. Tani waa sababta oo ah isweydaarsiga waxaa loo tixgeliyaa dembi aad u daran oo ah FA-ga Ingiriiska. Hoos waxaa ku yaal caddeymo fiidiyoow ah oo muujinaya Mings si lama filaan ah madaxa ugu duubtay Ibrahimovic madaxa.
Xaqiiqda Tattoo ee Tyrone Mings: Tyrone Mings ' jirku wuxuu u arkaa jirkiisa inuu yahay kanfadiisa. Wuxuu leeyahay tattoos ka sameysan naqshad u gaar ah oo muujineysa astaamaha 'isha, saacadda iyo calaamadaha cunugga' kaasoo leh astaamaha qibradiisa inta lagu jiray carruurnimada.
Tyrone Mings Tattoo. Dhibcaha Muuqaalka: JasonPixs iyo Instagram
Akadeemiyada Kubadda Cagta ee Tyrone Mings: Tyrone Mings waxay leedahay akadeemiyada kubbadda cagta ee loo yaqaan “Akadeemiyada Tyrone Mings”Kaas oo xaruntiisu tahay Birmingham, England. Akadeemiyaddu waxay aqbashaa carruurta (lab iyo dhadig) da 'u dhexeeya 6 iyo 16. Lahaanshaha akadeemiyadu waa qaabkiisa u gaarka ah ee bulshada ugu soo celiyo ganacsigiisa.
Akadeemiyada Tyrone Mings. Astaanta Sawirka: TMA
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings Story Plus' Soo koobista muuqaalka
Hantida FACT: Thanks for reading our Sheekada Carruurnimada Tyrone Mings oo ay weheliso Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Ryan Fraser Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Yashuuca King Story Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Taariikhda la beddelay: Abriil 4, 2019